Wirless Bluetooth Speaker.mp4
problemclean 22 Feb 2020
Bluetooth Earphone inpods 12.mp4
Bluetooth Dual Sim ဘောပင်ကင်မရာ
Wirless Charging Bluetooth Ear Phone
problemclean · 68 Views
problemclean · 26 Views
problemclean · 56 Views
problemclean · 390 Views
Wirless LED Projector (လက်မ ၁၈၀ ထိချဲ့ကြည့်နိုင်)
problemclean · 59 Views
problemclean · 918 Views
problemclean · 358 Views
water dancing speaker.mp4
problemclean · 211 Views
problemclean · 72 Views
JBL Bluetooth Sport Earphone.mp4
LED Projector With Speaker.mp4
problemclean · 638 Views
FM Bluetooth Music Speaker.mp4
problemclean · 30 Views
problemclean · 261 Views
problemclean · 150 Views
problemclean · 49 Views
Reference - EE0000103
ယခုဈေး - 25,000 ks ✅✅✅
ယခင်ဈေး - 40,000 ks
Website Link - https://didopc.com/ViTuh
တရားပွဲအတွက် သုံးခြင်ပါသလား ? ရပ်ကွက်အတွက် သုံးခြင်ပါသလား ? စာသင်ခန်းအတွက်သုံးခြင်ပါသလာ? ခဏတာ ပွဲအတွက် လိုအပ်နေပါသလား?
အသံလဲ ကျယ် ဈေးနန်းသက်သက်သာသာ နဲ့ ကိုယ် အိမ် နီးချင်းကအမြင်ကတ်လောက်အောင် ကောင်းတဲ့ speaker နဲ့ microphone လေး ရှာနေပါသလား ဒီ High Power Karaoake Microphone with bluetooth Speaker လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
Speaker အနေနဲ့ Bluetooth ပါဝင်ပြီး Phone , Laptop ,DVD , EVD , iphone android phone တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံပြုနိုင်ပါတယ်။
Battery အနေဖြင့်5hours အထက် အားသွင်းပြီးအသုံပြုနိုင်ကြောင့် မီးမရတဲ့ နေရာတွေမှာ သယ်သွားပြီး ယူသုံးမယ်ဆိုရင်လဲ အဆင်ပြေပါသေးတယ် ။အသက်ကြီးတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေက အစ တရားနာ ဖို့ USB ဖြစ်ဖြစ် တပ်ပြီးသုံးလို့ရဒါကြောင့် သဘောကျမှာ အမှန်ပါဘဲ ။
Microphone ထိုရန် အပေါက်ပါဝင်ပြီး Microphone တစ်လုံးလဲပါဝင်ဒါကြောင့် မိသားစု ဆုံရင်ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆုံရင်ဖြစ်ဖြစ် Karaoake ဟစ်မယ်ဆိုလဲ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် ။
ရပ်ကွက် အနေနဲ့ အသုံပြုမယ်ဆိုရင်လဲ battery အရင်ခေတ်လို speaker အော်လှန်ကြီးသယ်စရာမလိုဘဲ ဒါလေးကို သယ်သွားယုံဖြင့် အဝေးကနေတောင်ကောင်းကောင်းကြာရဒါတော့အမှန်ပါဘဲ ။
တရားဟောဖို့ သုံးမလား စာသင်ခန်းအတွက် သုံးမလား သုံးလို့အဆင်ပြေပါသေးတယ် အသုံအနေဖြင့် High power ကို အသုံးပြုထားတဲ့ အတွက် ကျစ်လစ်တဲ့ အသံနဲ့ကြားနိုင်ပါတယ် ။
မီးလုံးအနေနဲ့လဲ LED Lighting ပါဝင်ဒါကြောင့် စီးချက်လိုက် မီးအလှလေးတွေလဲမြင်နိုင်ပါသေးတယ် ။
ယခုဈေး - 25,000 ks ✅✅✅
ယခငျဈေး - 40,000 ks
တရားပှဲအတှကျ သုံးခွငျပါသလား ? ရပျကှကျအတှကျ သုံးခွငျပါသလား ? စာသငျခနျးအတှကျသုံးခွငျပါသလာ? ခဏတာ ပှဲအတှကျ လိုအပျနပေါသလား?
အသံလဲ ကယျြ ဈေးနနျးသကျသကျသာသာ နဲ့ ကိုယျ အိမျ နီးခငျြးကအမွငျကတျလောကျအောငျ ကောငျးတဲ့ speaker နဲ့ microphone လေး ရှာနပေါသလား ဒီ High Power Karaoake Microphone with bluetooth Speaker လေးနဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ ။
Speaker အနနေဲ့ Bluetooth ပါဝငျပွီး Phone , Laptop ,DVD , EVD , iphone android phone တှနေဲ့ ခြိတျဆကျအသုံပွုနိုငျပါတယျ။
Battery အနဖွေငျ့5hours အထကျ အားသှငျးပွီးအသုံပွုနိုငျကွောငျ့ မီးမရတဲ့ နရောတှမှော သယျသှားပွီး ယူသုံးမယျဆိုရငျလဲ အဆငျပွပေါသေးတယျ ။အသကျကွီးတဲ့ အဘိုးအဘှားတှကေ အစ တရားနာ ဖို့ USB ဖွဈဖွဈ တပျပွီးသုံးလို့ရဒါကွောငျ့ သဘောကမြှာ အမှနျပါဘဲ ။
Microphone ထိုရနျ အပေါကျပါဝငျပွီး Microphone တဈလုံးလဲပါဝငျဒါကွောငျ့ မိသားစု ဆုံရငျဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြးနဲ့ ဆုံရငျဖွဈဖွဈ Karaoake ဟဈမယျဆိုလဲ အရမျးအဆငျပွပေါတယျ ။
ရပျကှကျ အနနေဲ့ အသုံပွုမယျဆိုရငျလဲ battery အရငျခတျေလို speaker အျောလှနျကွီးသယျစရာမလိုဘဲ ဒါလေးကို သယျသှားယုံဖွငျ့ အဝေးကနတေောငျကောငျးကောငျးကွာရဒါတော့အမှနျပါဘဲ ။
တရားဟောဖို့ သုံးမလား စာသငျခနျးအတှကျ သုံးမလား သုံးလို့အဆငျပွပေါသေးတယျ အသုံအနဖွေငျ့ High power ကို အသုံးပွုထားတဲ့ အတှကျ ကဈြလဈတဲ့ အသံနဲ့ကွားနိုငျပါတယျ ။
မီးလုံးအနနေဲ့လဲ LED Lighting ပါဝငျဒါကွောငျ့ စီးခကျြလိုကျ မီးအလှလေးတှလေဲမွငျနိုငျပါသေးတယျ ။